Twitter | November 2019
Otu esi eji CCleaner
N'oge na-adịghị anya, maka ọtụtụ ndị ọrụ Ịntanetị na-arụ ọrụ, ọ bụ oge ịdebanye aha na Twitter, ọrụ microblogging kachasị ewu ewu. Ihe kpatara ịme mkpebi dị otú ahụ nwere ike ịbụ ọchịchọ ịmepụta akwụkwọ nke aka gị, ma ọ bụ gụọ akụkụ nke ndị ọzọ na ihe onwunwe ndị na-amasị gị.
Nbudata vidiyo site na Twitter
Enweghị vidiyo, ọ bụrụgodị na mkpụmkpụ, netwọk mmekọrịta dị ugbu a siri ike iche. Na Twitter abụghị naanị otu. Ọrụ microblogging dị mma na-enye gị ohere ibudata na ịkekọrịta obere vidiyo, ogologo oge adịghị karịa 2 nkeji 20 sekọnd. "Wunye" ihe nkiri na ọrụ dị mfe.
Ihichapụ akaụntụ Twitter
Ọ na-eme na ọ dị mkpa ka ihichapụ akaụntụ gị na Twitter. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ma ọ bụ oge dị ukwuu na ọrụ microblogging, ma ọ bụ ọchịchọ ị na-elekwasị anya na ịrụ ọrụ na netwọk mmekọrịta ọzọ. Ebumnobi n'ozuzu ya adịghị mkpa. Isi ihe bụ na ndị na-emepụta Twitter na-enye anyị ohere ihichapụ akaụntụ gị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Troubleshoot Ndenye Ndenye Ntanetị
Ntughari ikikere microblogging Twitter bu ihe dika otu eji eme ihe na netwọk ndi ozo. Ya mere, nsogbu na ntinye abugh ihe omuma. Ihe kpatara nke a nwere ike ịdị iche. Otú ọ dị, ọnwụ nke ịnweta akaụntụ Twitter abụghị ezigbo ihe kpatara nchegbu, n'ihi na nke a nwere usoro a pụrụ ịdabere na ya maka mgbake.
Otu esi abanye na akaụntụ Twitter
Ịmepụta akaụntụ ọ bụla na netwọk ahụ, ị ​​kwesịrị ịma mgbe niile esi esi na ya pụta. O nweghị ihe dị iche ma nke a ọ dị mkpa maka ihe nchebe maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye akaụntụ ọzọ ikikere. Isi ihe bụ na ị nwere ike ịhapụ Twitter ngwa ngwa ma ngwa ngwa. Ịpụ na Twitter na ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu Usoro usoro nkwenye na Twitter dị mfe ma dị mfe dịka o kwere mee.
Otu esi akwalite akaụntụ gị na Twitter
Ònye ga-achọ ịghọ ewu ewu na Twitter? Ezipụla ozi na ihe efu, ma na-achọta mgbe niile nzaghachi nye ha. Ọfọn, ọ bụrụ na ọrụ microblogging bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke azụmahịa gị, ọ dị mkpa ịmalite ịkwalite akaụntụ Twitter gị. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji kwalite Twitter na ụzọ ndị ị ga - esi hụ na ọ dị mma.
Ntughari asụsụ asụsụ asụsụ Twitter
Netwọk mmekọrịta netwọk Twitter bụ ezigbo ndị ọkachamara site n'akụkụ ụwa dum, ebe ọ na-enye gị ohere ịnọgide na-agbaso ihe omume ndị dị ugbu a ma soro isiokwu ndị na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ha etinyeghị oge na ya. Site na ndabara, interface nke saịtị ahụ na ndị ahịa ngwa ahịa dị otu nke ahụ edobere na OS site na ndabara na / ma ọ bụ jiri na mpaghara ahụ.
Esi ewepụ Twitter retweet
Achọpụtaghachi bụ ụzọ dị mfe ma dị ebube ịkọrọ ndị ọzọ echiche nke ụwa. Na Twitter, retweets bụ ihe nchekwa zuru oke nke teepu onye ọrụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na mberede, ọ dị mkpa ka ị wepụ otu akwụkwọ ma ọ̄ bụ karịa ụdị a? N'okwu a, ọrụ microblogging na-ewu ewu nwere ọrụ kwekọrọ.
Ịgbanwe aha njirimara Twitter
Ọ bụrụ na ị tụlee aha njirimara gị ọzọ na-adịghị anakwere ma ọ bụ naanị ịchọrọ imelite profaịlụ gị ntakịrị, ọ dị mfe ịgbanwe aha njirimara gị. Ị nwere ike ịgbanwe aha mgbe nkịta "@" mgbe ọ bụla ịchọrọ ma mee ya ọtụtụ ugboro dị ka ịchọrọ. Ndị na-emepe emepe adịghị eche. Otu esi eme ka aha a gbanwee na Twitter Ihe mbụ dị mkpa ị na-arịba bụ na ịkwesighi ịkwụ ụgwọ maka ịgbanwe agbanwe aha njirimara Twitter gị.
Otu esi tinye ndị enyi na Twitter
Dị ka ị maara, ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụzọ bụ isi ihe dị na Twitter microblogging ọrụ. Na isi nke ihe niile - ihe gbasara mmadụ. Ị na-achọta ndị enyi, na-agbaso akụkọ ha ma na-esonye ike na mkparịta ụka maka ụfọdụ isiokwu. Na nke ọzọ - a na-ahụ gị ma meghachi omume na akwụkwọ gị. Mana otu esi etinye ndị enyi na Twitter, chọpụta ndị na-amasị gị?
Otu esi eme ego na Twitter
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị ọrụ mgbasa ozi ọ bụla na-ewu ewu ugbu a nwere ohere ịtụle akaụntụ gị, na Twitter abụghị ụdị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, profaịlụ gị na ọrụ microblogging nwere ike ịba uru ego. Otu esi eme ka ego na Twitter na ihe iji mee maka nke a, ị ga-amụta site n'ihe a. Hụkwa: Otu esi emepụta akaụntụ Twitter. Ụzọ iji monetize akaụntụ Twitter gị. Nke mbụ, anyị na-ahụ na a ga-eji ego Twitter mee ihe dịka isi iyi ego ọzọ.
Kedu ihe Twitter na otu esi eji ya
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị mara ihe na-eme n'ụwa, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'echiche nke ndị a maara na ọ bụghị ihe dị ukwuu banyere nke a ma ọ bụ ihe omume ahụ, nakwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa echiche gị ma soro ndị ọzọ kwurịta ya, Twitter bụ ihe kachasị mma maka nke a. ngwaọrụ Mana olee ọrụ a na otu esi eji Twitter?
Wepụ ihe niile tweet na Twitter na clicks.
Mkpa ị ga-ekpochapu teepu nke posts na Twitter nwere ike ibili maka onye ọ bụla. Ihe kpatara nke a nwere ike ịdị iche, ma nsogbu ahụ bụ otu - ndị mmepe nke ọrụ ahụ enyeghị anyị ohere ihichapụ tweet niile na ọnụọgụ abụọ. Iji kpochapụ teepu kpamkpam, ị ga-ehichapụ akwụkwọ ndị ahụ n'otu n'otu.